Fahafahan'ny tsirairay miditra amin'ny paleta rehetra mankany amin'ny trano fitahirizana feno
Tratra ny fihodinan'ny stock tsotra
Ny fanitsiana andry mora dia mahazaka haavon'ny pallet miovaova.
Mifanaraka amin'ny fomba fampitaovana maro
Fandeferana mahazatra amin'ny gorodona rehefa avo 10m ny haavony
Ny palety ambany dia azo apetraka amin'ny tany.
95% Fampiasana toerana antonony ambony.
1.Product fampidirana ny paleta voafantina talantalana
HEGERLS Selective Pallet Racking no vahaolana tsara indrindra ho an'ireo trano fitahirizana entana izay ilana hitazomana lahatsoratra maro karazana ao anaty paleta. Manome fidirana mivantana amin'ny paleta rehetra hahazoana fidirana 100% sy fihodinan'ny tahiry tsara izany. Ny paleta dia azo jerena, ampidirina ary hafindra tsirairay manome fikirakirana haingana ny entana vita amin'ny pallet. Manome fanamainana mora sy mahazaka haavon'ny paleta miovaova izy io.
4.Production antsipirihany amin'ny talantalana voafantina
4.1Ny rafitra fitehirizana avo mba hitahirizana pallet, fampiasana trano fitehirizana mahomby;
4.2 Rafitra fidirana voalohany-farany-farany;
4.3Top sy ny braced miverina ampiasaina mba hanamboarana ny manontolo rakotra, mahatonga ny manontolo racking marin-toerana sy azo antoka;
4.4 Ireo paleta avo lenta voalohany dia azo apetraka amin'ny tany ambany
4.5 Manamora sy mora apetraka, manatsara ny fampiasana ny habaka.
Teo aloha: Talantalana HEGERLS talantalana
Manaraka: Fonosana mezzanine fitehirizam-bokin'ny HEGERLS
Racking Pallet manokana
Rafitra fandefasana lalina
Racking lalina roa
Nandrisika Pallet Rack
Rakotra Pallet Hannibal